Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd. oo la aasaasay 2018 kaas oo ka kooban koox farsamoyaqaanno iyo iib ah oo khibrad qani ah u leh dallacaadda wireless-ka ee taleefanka gacanta.Farsamayaqaannada, kuwaas oo leh 15 ~ 20 sano oo waayo-aragnimo ah maaraynta wax-soo-saarka, nidaamka isbeddelka tignoolajiyada iyo aqoonta ku jirta goobta dallacaadda wireless, waxay ka socdaan Foxconn, Huawei iyo shirkado kale oo caan ah.Waxaan diirada saareynaa R & D, soo saarista qalabka dallacaadda wireless-ka ee taleefannada gacanta, dhagaha-dhegaha TWS iyo saacadaha tufaaxa, waxaanan bixinnaa xalal dallacaadda wireless-ka xirfadeed.Waxaan nahay WPC iyo USB-IF soo saaraha xubinta.Inta badan dabaylahayaga bilaa-waayirka ah waxa ay dhaafeen shahaado QI, MFi, CE, FCC, RoHS.Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu qaabeeyey moodallo naqshadeysan oo leh shatiyada muuqaalkeena.
Shirkadda waxaa ka go'an in ay cilmi-baarista iyo horumarinta alaabta elektarooniga ah oo tayo sare leh iyo xal si ay u abuuraan iskaashiga guul-guul iyo in la dhiso muddo dheer oo xasilloon horumarinta xiriirka istiraatijiyadeed.
● Himilada: Si loo abuuro qiimo lammaanaha, Si kor loogu qaado farxadda shaqaalaha, iyo in laga qayb qaato horumarinta bulshada.
● Aragtida: Inaad noqoto hogaamiyaha warshadaha alaabada elegtarooniga ah ee cusub.
● Falsafadda: Iyada oo si joogto ah loo wanaajinayo, si loo siiyo isticmaaleyaasha alaab iyo adeegyo qiimo leh.
● Qiimaha: Isticmaale ku jihaysan, daacadnimo iyo daacadnimo.
Warshadayada waxa loo xisaabiyay sidii xubin Apple ah oo MFI ah oo shahaadaysan.Isla mar ahaantaana, waxaanu nahay soo saaraha xubin ka ah WPC iyo USB-IF.Inta badan dabaylayaashayada bilaa-waayirka ah waxay dhaafeen shahaadooyinka QI, MFI, CE, FCC, iyo RoHS.
Waxaan had iyo jeer raacnaa tayada sare, eber-cilad, badbaado iyo alaab deegaan saaxiibtinimo.Xaqiijinta macaamiishu waa falsafadayada ganacsi, markaa waxaanu leenahay xakamaynta tayada alaabta aad u adag.
Waxaan leenahay nakhshad wax soo saar xirfad leh iyo kooxda R&D oo leh farsamayaqaanno ka socda shirkado caan ah sida Foxconn iyo Huawei.Waxaan haynaa 15-20 sano oo maarayn wax soo saar ah, xalalka isbeddelka farsamada iyo khibrad farsamo oo ku saabsan dallacaadda wireless.
Waxaan bixinaa xalal habaysan oo horumarsan oo loogu talagalay alaabada dallacaadda wireless-ka, kaas oo xallin kara dhibaatooyinka macaamiisha waqti gaaban oo ku dadaala suuqa marka hore.